Adobe Portfolio: Samee oo Marti geli Faylkaaga internetka | Martech Zone
Adobe Portfolio: Dhis oo Marti geli Faylkaaga internetka
Axad, Abriil 24, 2016 Axad, Abriil 24, 2016 Douglas Karr
Adobe runtii wuxuu laadayaa kulankooda khadka tooska ah. Waxaan isticmaaleynay Creative Cloud dhowr sano hada waxaan isku aragnaa inaan qaadanayno teknoolojiyada Adobe si aad iyo aad ah. Hada Adobe ayaa soo saartay tiisa Portfolio goobta, xalka ugu fiican ee loogu talagalay dhagaystayaasheeda bartilmaameedka naqshadayaasha iyo hay'adaha. Marka lagu daro isticmaalka magacaaga gaarka ah, tifaftiraha Portfolio Adobe wuxuu bixiyaa sifooyinka soo socda:
Marka lagu daro isticmaalka magacaaga gaarka ah, Boodhadhka Adobe waxay bixisaa astaamaha soo socda:
Access Noocyada nooca maktabada farta.
Tafatirka tooska ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto isbeddeladaada markaad sameyneyso.
Gaaritaan toos ah: Wax kasta oo aad arki karto, waad wax ka beddeli kartaa.
Ka fiiri boggaaga jawaabta si miisaaman miisaska, kiniiniga iyo moobiilka.
Abuur mashaariic Portfolio ama Behance oo u dhexeeya labada.
Ikhtiyaar si aad u joojiso midig-guji si aad u ilaaliso sawirradaada.
Ikhtiyaar si aad awood ugu siiso soo bandhigida sanduuqa iftiinka sawiradaada.
Barxadda horeba waxay u leedahay qaar qurux badan, moobiil diyaar ah, mowduucyo jawaabo leh oo ay ka mid yihiin:
Tags: adobeadobe faylalkabaraaruggalka internetkafaylalkagoobta faylalkanooca
Tirakoobka Kobaca Warbaahinta Bulshada Ilaa 2015
Sare u kaca Suuqgeynta iyo Xayeysiinta ku saleysan Dadka